Soomaliya: Weerar dab lagu qabadsiiyay xarunta caafimaadka Bisha Cas | ICRC da Soomaaliya
Soomaliya: Weerar dab lagu qabadsiiyay xarunta caafimaadka Bisha Cas
29/08/2021 , Maqaallo
Gedo (ICRC) – Guddiga Caalamiga ah ee Laanqeyrta Cas (ICRC) iyo Ururka Bisha Cas ee Soomaaliyeed (SRCS) waxa ay aad uga xunyihiin weerarkii Sabtiga lagu qaaday xuranta caafimaadka Baardheere ee gobolka Gedo ee Soomaaliya. Dabka oo ay qabadsiiyeen dibadbaxayaashu, ayaa baabi’yay xarunta caafimaadka ee SRCS iyada oo ay sidoo kale sadex shaqaalaha ka mid ah ku dhaawacmeen dhacdadaas.
Muuqaal kore oo kaliya ayaa ka soo haray xarunta caafimaadka oo celcelis ahaan sameyn jirtay 2000 oo baaritaano ah bishiiba. Dhacdadan ayaa sidoo kale carqaladeysay howlaha labada hey’adood oo ay ku jiraan shaqooyinkii muhiimka ahaa ee xarumaha caafimaadka ee guur guura kuwaas oo uu qalabkoodii dabka ku baaba’ay.
“Tani waa wax aan la aqbali karin! Qoysaska iman jiray xarunta caafimaadka ayaa hadda ku qasban in ay meelo kale daryeel caafimaad u raadsadaan. Ma jirto sabab loo bur-burin karo xarun caafimaad ama loo dhaawici karo shaqaale caafimaad.” ayuu yiri Juerg Eglin, madaxa ICRC-da Soomaliya.
Mohamed Salad Ali – Ku xigeenka Madaxa xafiiska, Kismaayo +252 612 465 324
Abdulkadir Ibrahim Haji “Afi” – Agaasimaha Xiriirka SRCS +254 722 940 297
Abdikarim Mohamed – Madaxa Xiriirka ICRC-da Soomaaliya +254 770 171 756